Ụbọchị: 27 October 2019
Ejiri mkpụrụ ego nke ndị njem jiri ule 'mgbọ egbe' nke ụwa nke China mepụtara ma nwee ike 350 km kwa elekere jiri mkpụrụ ego nke onye njem were nwalee. Nnwale nke nnwale nke ndị njem megide mkpụrụ ego ahụ na oke ọsọ [More ...]
Oge Izirin Izmir Soke na Map 2019. CDgbọ njem TCDD Co. bụ ụgbọ elu ezumike nka 1 n’etiti Izmir na Söke. İzmir Söke bụ 127 km na nkezi oge njem [More ...]
Onye isi oche nke Onye isi ala, Recep Tayyip Erdogan, ga-ejedebe na nyocha nke Nnyocha Mgbasa Gburugburu Ebe Obibi (EIA) na November 28 Review Nyocha Ego (IDK). 75 nwere ọnụ ahịa nke TL ijeri [More ...]
Njikọ ụgbọ okporo ígwè China na-ejikọ Obodo 39 karịa 5,8 puku Kilomita
Ogologo ngụkọta nke okporo ụzọ jikọtara 39, China, agafeela otu puku kilomita. Ozi nke Transportgbọ njem China Sözcüsu Wu Chungeng dị na okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè dị n'etiti obodo 39 nke mba ahụ. [More ...]
Minista Turhan: 'Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ndị njem na-abawanye na Burdur'
Onye Minista nke Transportgbọ njem na akụrụngwa Mehmet Cahit Turhan gara Burdur Governorship. Followinggbaso mmemme Isparta, Minista Turhan, onye bịara Burdur site na thelọ Ọrụ Gọvanọ, Gọvanọ Hasan Şıldak na protocol. [More ...]
Bugbọ okporo ụche nke Bayburt ruo ọtụtụ afọ dị ezigbo mkpa maka mpaghara a
Tralọ ọrụ Trabzon Bayburtlular, bụ onye na-enweghị nkasi obi banyere enweghị Bayburt n'okporo ụzọ okporo ụzọ Erzincan-Gumushane-Trabzon, nke ekwurịtara na ọha na eze n'oge na-adịbeghị anya ma mee nro maka ọrụ ahụ, kwuru nkwupụta akwụkwọ akụkọ. Karịsịa na Trabzon [More ...]
Oge Oge Ọzụzụ Izmir Tire na Map 2019: TCDD Taşımacılık A.Ş. Emere ụgbọ elu 4 n'etiti betweenzmir Tyre. Bawanye n'okporo ụzọ ndozigharị na-arụ ọrụ n'etiti İzmir Ödemiş [More ...]
Akuko, ọdịdị na omenaala amalitela site na bọs njegharị nke Obodo Elazığ tinye n'ọrụ iji nyere aka n'ịkwalite ụkpụrụ njem obodo. Obodo Elazığ, nke na-eji bọs emebere njem na -aga obodo [More ...]
Balıkesir Metropolitan Obodo kpebiri n’otu n’otu ime ka ụmụ akwụkwọ nwute 17 dị n’okporo ụzọ bọs obodo. Usoro oge ụmụ akwụkwọ 2,00 TL 1,65 TL, KYK - Usoro ụmụ akwụkwọ Campus [More ...]
Amalitere ịrụ arụmọrụ n'okporo ụzọ dị na Mihalıççık
Malite Tepebasi na Inonu, Khan na Seyitgazi na-aga n'ihu roadworks ihe atụ na ọtụtụ municipalities na òtù na Turkey, Eskişehir Metropolitan Municipality, demystifies ihe ụzọ Mihaliccik district. Site na ụmụ amaala [More ...]
Nnyocha na-aga n'ihu na ụgbọ ala ndị ọrụ maka Transportgbọ njem ofmụ akwụkwọ na-echekwa na Mersin
Obodo Mersin na-aga n’ihu na-eme nyocha maka ọrụ maka ụgbọ njem ụmụ akwụkwọ na-adịghị ize ndụ. Ndi otu ndi uwe ojii nke obodo ukwu na-enyocha nyocha nchekwa na izi ezi n'ụlọ akwụkwọ niile nọ n'obodo ahụ. A na-eme nnyocha ndị a na ụkpụrụ dị elu, [More ...]
Mersin Metropolitan Municipality Mayor Vahap Seçer, Mersin Cycling Ndị njem Njikọ na Mgbakọ Metropolitan nke afọ a na mmekorita ya na 6. keere òkè na Caretta Bicycle Festival. Secor, Turkey si na-ekere òkè dị iche iche n'obodo 22 [More ...]
29 na Izmir Transport na October 1 Kuruş ..! A na-ekwupụta mmemme Republic Day na Izmir
Obodo Izmir nke obodo ukwu mara ọkwa mmemme Day Day nke 29 October. N'ụbọchị pụrụ iche ebe a na-ekpebi ego ụgbọ njem ọha na eze dị ka "1 kuruş,, ọkọlọtọ Turkey ga-ebu 350 mita na mbugharị nke lantern. Leman Sam [More ...]